वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : ब्लगर भेलाबाट
लामो समयदेखि प्रतिक्षित ब्लगर भेला आज सम्पन्न भयो।
नेपाली ब्लग जगतले केहि वर्ष लामो बाटो तय गरिसकेको छ। नेपाली ब्लग जगत संख्यात्मक र गुणात्मक दुबै हिसाबले समृद्ध पनि हुँदै गईरहेको छ। नेपाल भित्र र बाहिरबाट नेपाली, अंग्रेजी र अरु बिभिन्न भाषाहरुमा धेरै ब्लगहरु नियमित रुपमा सञ्चालित भईरहेका छन्। नेपाली ब्लग जगतको आगामी बाटो सकारात्मक संकेतहरुले भरिएको देखिन्छ, तर हामी सन्तुष्ट भएर नीच मारेर बस्ने स्थितिमा भने कदापि पनि छैनौं।
ब्लगकर्म आफैं एउटा अनलाईन गतिबिधि भएकाले ब्लगजगतमा आफ्नै खाले अन्तर्कृया र सम्वाद निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। ब्लगपोष्ट र प्रतिकृयाका माध्यमबाट विचार आदानप्रदान र छलफल चलिरहेका हुन्छन्। अहिले आएर फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक संजालका माध्यमबाट पनि ब्लगरहरु अन्तर्कृयारत छन्। ब्लग र सामाजिक संजालको संयोजनले एउटा नयाँ संचार-संस्कृतिलाई जन्म दिँदै गरेको भान हुन्छ।
ब्लग र सामाजिक संजालको मात्रै भर पर्दा सम्वाद पूर्ण नहुन सक्छ। ब्लगरहरुका अनुभव साट्न, कुनै विषयविशेषमा छलफल गर्न भने औपचारिक भेलाहरुकै जरुरत पर्नसक्छ, यो नै बढी प्रभावी हुनसक्छ। 'दौंतरी' ले संसारभरि रहेका नेपाली ब्लगरहरुबीच अनलाईन भेला गर्दै आईरहेको छ केहि समय यता। तर नेपाली ब्लगरहरुबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्तर्कृया भने त्यति धेरै भएको छैन। निकट भूगोलमा बस्ने ब्लगरहरुबीच प्रत्यक्ष भेला सहजै सम्भव पनि हुन्छन्। काठमाण्डौंमा विगतमा हुने गरेका यस्तै प्रत्यक्ष भेटघाट, भेलाको क्रम टुटेको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भईसकेको थियो। यिनै पृष्ठभूमिमा आजको यो ब्लगर भेलाको परिकल्पना गरिएको थियो।
कार्यक्रमको शुरुवाती परिकल्पना यसलाई अनौपचारिक राख्ने र प्रत्यक्ष चिनजान र केहि भलाकुसारीका माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने थियो। सहभागी संख्या पनि त्यति धेरै अनुमान गरिएको थिएन। यस बारेमा Event बनाएर फेसबुकमा राख्दा र धेरै साथीहरुलाई सहभागिताको लागि निम्तो पठाईसक्दा पनि सम्भाव्य सहभागिता कमै देखिन्थ्यो। आज बिहानसम्म फेसबुकमा सहभागिता निश्चित गर्ने साथीहरुको संख्या ४४ पुगेको थियो, यो आधारमा हामीले कम्तिमा २५ जनाभने पक्का सहभागी हुने अनुमान गरेका थियौं।
कार्यक्रम क्यापिटल एफएमको प्रशिक्षण कक्षमा भएको थियो र सहभागी संख्या थियो २०। छोटो समयको तयारी र सूचनाको आधारमा भएको यो सहभागितालाई उत्साहजनकनै मान्नुपर्छ।
कार्यक्रम परिचयको आदानप्रदानबाट शुरु भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी साथीहरुमध्ये दुईजनासंगमात्र मेरो प्रत्यक्ष चिनजान थियो। बाँकी सबैसंग आज पहिलोचोटि भेटघाट भएको भएपनि ब्लग र फेसबुकको सम्बन्धका कारण चीरपरिचितझैं लाग्नुभएको थियो:)
कार्यक्रममा नेपाली ब्लगजगतको वर्तमान स्थिति र समस्याहरुका बारेमा छलफल भएको थियो। हालै, अश्लील साईटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको एउटा निर्णयमा आधारित भएर केहि इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ब्लगस्पट डोमेनलाईनै ब्लक गरेको घटनामाथि विशेष चर्चा भएको थियो। यस्तो स्थिति फेरि दोहोरिएमा, वा ब्लगरहरुलाई अरु बिभिन्न अवरोध र समस्याहरु आईलागेको बेलामा एकीकृत र सशक्त ब्लगर आवाज कसरी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि साथीहरुले आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। सबै धारणाहरुको सारको रुपमा, ब्लगरहरुको आपसी संजाललाई इमेल समूहजस्ता संरचनाका माध्यमबाट नियमित राख्ने र कुनै समस्या र अवरोध आईपर्दा सम्पूर्ण ब्लग जगतले एउटै आवाज उठाउने बानी बसाल्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरियो। देशको तरल राजनीतिक परिश्थितिका कारण कुनैपनि बेला अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कैंची चल्नसक्ने सम्भावना टड्कारो छ। त्यो स्थितिमा केहि ब्लगरहरु वा पूरै ब्लग जगतमाथि वैचारिक/भौतिक दबाब पर्नसक्छ। यसैले आवश्यक पर्दा तुरुन्त आन्दोलित हुन सक्ने गरी ब्लगजगत संगठित हुनुपर्छ। यो 'संगठित' हुने कामका लागि एउटा खुकुलो तर नियमित संरचना पर्याप्त हुन्छ, कुनै 'औपचारिक' र 'दर्तावाल' संगठनको आवश्यकता छैन। मुख्य कुरो, सामान्य स्थितिमा आफ्नै हिसाबले ब्लगलेखनलाई निरन्तरता दिने तर आवश्यकता पर्दा सबै एकै भएर लाग्ने गरी हामी ब्लगरहरुले आफैंलाई दिक्षित गर्ने, आत्मानुशाशित पार्ने हो।
सामाजिक मानसिकतामा नेपाली ब्लगजगतलाई सशक्त रुपले स्थापित गर्नका लागि मूलधारका संचारमाध्यमहरुबाट लिन सकिने सहयोगका बारेमा कुराकानी भएको थियो। मूलधारका मिडियामा कार्यरत केहि साथीहरुनै सकृय ब्लगरपनि रहनुभएकाले उहाँहरुले केहि बाटो निकाल्नुहुनेछ भन्न्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। साथै, भेलामा विगतका भेलाहरुमा गरिएका छलफलहरुको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो।
ब्लगर भेलाका बारेमा आज सहभागी सबै साथीहरुबाट पनि लेखिनेनै छ, नेपाली ब्लगहरु हेर्दै गर्नुहोला।
अन्त्यमा, यहाँहरु सबैमा तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरुको जीवन उज्यालो र समृद्ध रहिरहोस् सधैंभरी।
Posted by Basanta at 10:10 PM
Labels: नेपाली ब्लगरहरु
Krishna K shrestha"Kals" November 5, 2010 at 4:27 AM
मलाई पनि भाग लिने रहर त थियो भेलामा तर यो बिदेशी बसाइले.....
Sadhana Sharma November 5, 2010 at 10:55 AM
yea.. same here.. j hos ramailo bhayo jasto chha.. :)
sandipan November 5, 2010 at 1:55 PM
साच्चै दाई यो क्रम निरन्तर चल्दै जानुपर्छ र ब्लगर समुदायले दुई भिन्न पुस्तामा सहयोगी र एकताको विकास गरेको छ । जानकारीका लागि धन्यवाद बसन्त दाई ।
Pradeep Kumar Singh November 5, 2010 at 8:24 PM
Blogger Bhela ko Pahilo Post padhera ramro lagyo!
रमेश मोहन अधिकारी November 5, 2010 at 10:14 PM
साथीहरूले राम्रो कार्य थाल्नु भएको छ । हामी उपस्थित हुन नसकेकाले चुकचुक लागे तापनि हामी सहभागी भएर सँगै बसेर बात मारे जस्तो पनि लागेको छ । सहभागी सबै साथीहरूलाई धन्यवाद !
ब्लगर एकता जिन्दावाद !
लौ यो पनि एउटा थप उदाहरण नै भयो । नेपालको विशिष्ट चरित्रको सानो तर स्पष्ट चित्रण । याने कि काम केहि नगर्ने बाजेहरु दन्तबजान गर्न भेला भएछन र तिनको साँगोपाँगो वर्णनमा पूरा सिंगो ब्लग समर्पित छ । अनि लास्टमा आएर "कार्यक्रमस्थलको ब्यबश्थाका लागि गर्नुभएको प्रयासका लागि रुपेशजीलाई विशेष धन्यबाद!" रे । याने कि उहाँले व्यवस्था गर्नुभएको हैन व्यवस्थाका लागि प्रयास मात्रै गरेकोमा पनि धन्यवाद ?? वाह वाह वाह - यस्तरी शव्द शव्द खेलाइ खेलाइ "काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु" गर्न बाजेहरु झुरुप्प जम्मा हुन्छन। एउटा बाजेले अर्को बाजेलाइ उचाल्छन र काममा खट्नेहरुलाइ खेताला बनाएर थचार्छन । कस्तरी जानेको बाबै !!!
यसो लिस्ट हेरे, कागको वीचमा बकुल्ला जस्तो - यो ज्यापु रमेशलाइ त्यहाँ किन जानु परेको ? यस्तै बाहुनको सेवा गरेर अपजस मात्रै बोक्न ?
देश गोलखाडी गएको यसरी नै हो - ब्लगमै देखियो यो तीतो सत्य ।
(शायद यो कमेण्ट प्रकाशीत हुँदैन होला, नभए साझा डट कम मा पुन: प्रकाशित गरिने छ ।)
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) November 6, 2010 at 6:19 AM
बसन्त दाइ तपाइहरुले गर्नु भएको प्रयास नेपाली ब्लगरको दुनियामा एउटा नया आयाम भएर बस्ने छ !
अबको भेला भने औपचारिक रुपमै कुनै विषस उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्ने खालको र बढी भन्दा बढी ब्लगहरु उपस्थिति गराउन सक्ने गरि को जोरजाम गर्नु पर्ने भो !
धन्यबाद यहाँहरु सबैलाई !
Nepalean November 8, 2010 at 2:13 PM
अन्त्यमा बाजे र ज्यापूको दांजो गर्ने नाम नभएका मित्रलाई सकरात्मक बन्न अनुरोध गर्दछु।
भेला काठमान्डौमा, आफू परदेशमा। अन्यको कथा जस्तै मेरो पनि ब्यथा उस्तै छ। कुराकानी सुन्दा भेला रमाइलो भएछ। समय समयमा यस्ता भेलाहरु गर्दै गर्नुहोला।
भेलामा दौंतरीका ब्लगर पनि सामेल हुनुभएको रहेछ। त्यसमा खुसी लाग्यो। दौंतरीले गरेको अन्तराष्ट्रीय भेलाको पनि कुरा उठेको रहेछ। दौंतरीको अनलाईन भेला जारी नै रहनेछ। हरेको बर्षको अगष्ट र फेब्ररीमा हुने अन्तराष्ट्रीय भेला अब फेब्ररी २०११ मा दौंतरीमा हुने जानकारी गराउन चाहान्छू।
Chaitanya November 11, 2010 at 12:41 PM
अर्को एउटा बाटो पनि
मलाई बोकेर !
सूर्य/सिकारु November 12, 2010 at 2:49 AM
स्वच्छ र सफा मनले आयोजित भेला निकै तारिफयोग्य छ ।एक दुई जनाको गलत प्रचार र कानेखुसिबाट यो संन्जाल डगमगिने छैन पक्कै । हामी बिश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर ब्लगमा रत्तिए पनि हाम्रो साथ सधै यहाहरुसंग हुनेछ । Happy blogging ..
Basanta November 27, 2010 at 2:06 AM
यहाँहरु सबैलाई हार्दिक धन्यबाद! प्रतिकृयाको लागि समय निकाल्न ढिला भयो, माफ पाऊँ।
रमेशजी, मैले जे देखें त्यहि लेखेको हुँ। मैले पूरा सत्य देखेको रहेनछु, त्यसका लागि माफी चाहन्छु। अनि माथि साथीहरुले भनेजस्तै अलिकति सकारात्मक र परिपक्व प्रतिकृया लेखिदिनुभएको भए अझ राम्रो हुनेथियो। जातीय आक्षेपमा सिधै ओर्लेर कुर्लनुपर्ने अपराध त यो पोष्टले गरेको थिएन शायद।